Geelle muxuu ka yiri xaaladda Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Geelle muxuu ka yiri xaaladda Soomaaliya?
Geelle wuxuu sheegay in Jabuuti ayu walwal ka qabto sida ay hadda wax u socdaan dalka Soomaaliya, asigoo ka hadlaya khilaafka hareeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Djibouti, DJIBOUTI - Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay khudbad horay loo duubay ka jeedinaayay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, kaas oo ka socda magaalada New York ee cariga Mareykanka.
Geelle ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan gobolka Afrika, si gaar ah waxa uu soo qaatay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan wajaheyso, dagaalka Itoobiya iyo sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa Jabuuti iyo Eritrea.
Jabuuti ayuu tilmaamay inay ka go’an tahay sidii ay ugu talaabsan laheyd mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni leysku haleyn karo oo kala dhaxeeya dariskeeda iyo wadamada kale ee Africa.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in uu ka xun yahay in sidii loo baahnaa aysan u socon dadaalladii la isugu soo dhaweeyn lahaa Jabuuti iyo Ereteriya, kaas oo xal u noqon lahaa dagaalkii soo bilowday 2008, ee labada dalba mid ba sheeganaayay lahaanshaha dhulka Doumeira oo ah deegaan jasiirad yar ah oo badda ku yaalla, waa goob muhiim ah gaar ahaan dhinaca marinka badda cas.
"Jabuuti waxaa ka go’an inay markasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal hagaagsan, Nabad waarta iyo isdhex-gal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay ka wada faa’iidyestaan, dadyowga ku nool dalalka Geeska Afrika ayuu yiri.” Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Xaaladda Itoobiya oo ah mid aan deganeyn ayuu xusay in dagaallada lagu doonayo in xal looga gaaro dagaallada ka socda, ay ka qabaan rajo wanaagsan oo ay dadku si nabad galyo ah kuwada noolaadaan.
Mar uu khudbadiisa ku soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, ayuu ku sheegay in Jabuuti ay soo dhaweyneyso horumarrada ka socda Soomaaliya, inkastoo uu tilmaamay inay walwal ka qabaan sida ay hadda wax u socdaan, madama khilaaf hareeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Farmaajo iyo Fahad oo walaalsaday Itoobiya iyo Eritrea ayaa cadaw ka dhigtay Jabuuti oo ah walaalo Soomaaliyeed, taas oo ka damqaneysay dhibaatada Soomaaliya la degtay tan iyo qaran jabkii.
Jabuuti oo dagaal kala dhaxeeyo Eritrea ayuu Farmaajo u diray Ciidan Soomaaliyeed si ay u difaacaan Eritrea, taas oo kuu muujineysa danaha siyaasadeed ee Farmaajo, oo sidoo kale Itoobiya ka dalbaday inay qaadka keenaan Soomaaliya, halkii horay ay kenya u keeni jirtay Qaadka.
Maalmo kahor, Fahad Yaasiin iyo rakaab la saarnaa diyaaradda Turkish airlines ayaa laga celiyay dalka Jabuuti, kuwaas oo dib loogu celiyay halkii markii hore laga soo qaaday oo aheyd magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.